Ii-FAQ malunga ne-TOFRE Heat Herbal sticks-Sichuan King Continental Blotechnology Co. Ltd.
Asikabinawo umsebenzi wokuthengisa ngokuthe ngqo kwimarike yehlabathi okwangoku.Ukuba unomdla kwiimveliso zethu kwaye ufuna ukuzama, unokushiya ulwazi lwakho loqhagamshelwano kwaye usithumele kuthi nge-Qhagamshelana nathi iphepha, okanye uqhagamshelane namaqabane ethu okusasaza asekuhlaleni emhlabeni wonke ukuze uthenge.
Isiseko soPhando noPhuhliso lothotho lweemveliso ze-TOFRE zonke zisekwe kwisakhono esinamandla selabhoratri yethu yokwenziwa kwezinto ezintsha ngamayeza.Injongo yethu yantlandlolo kukudibanisa ubuchwephesha bamayeza athathwe kwizityalo zendalo, kunye neyeza lemiphunga ukwenza indlela enempilo yokutshaya kwabo batshayayo.
1.Yintoni i-TOFRE HEAT HERBAL Stick
I-TOFRE Heat Herbal Stick yimveliso entsha kraca yengca, esiyidalela abantu abatshayayo (Ubushushu-bungatshisi).Xa kuthelekiswa nezinti zecuba ze-HNB, i-TOFRE Heat Herbal Stick ivelisa ifomula enempilo ye-herbal fuse inqanaba letekhnoloji yencasa yecuba yenza ukuba igqibelele ukutshaya nayo ibe sempilweni.Ukongeza, sifaka uqhushumbo lwecuba kwintonga.Emva kokutyumza ukuqhushumba, uya kuqalisa uhambo oluhle lokutshaya, kwaye ufumane incasa engcono yeemveliso zecuba ze-HNB....shush!Lo ngumlingo we-brand ye-TOFRE.Kwaye kwakhona i-TOFRE Heat Herbal Stick inokulungelelaniswa ngokugqibeleleyo kuzo zonke izixhobo zobushushu kwimarike.
2.Yintoni iteknoloji ye-TOFRE Heat Herbal Sticks?
Ubume bentonga ye-TOFRE herbal stick ithathwe kowona mgaqo wethu wendalo we-honeycomb Ngokudibanisa indlela "yesakhiwo", "i-microwave", "i-microbiology", "ikhemikhali yokutya", "i-low-temperature puffing" kunye nobunye ubuchwepheshe obuphayona.
I-TOFRE'S eyenziwe ngokwemvelo, ikhululekile & iyunifomu ye-honeycomb ye-ultra-microporous ivumela ukufudumeza ukuba kube nokulinganisela kwaye akuyi kulahla nayiphi na i-slag kwisixhobo.Ukongeza, ubuchwephesha besakhiwo se-TOFRE bunokuphucula ukusebenza kakuhle kosasazo ngokufudumeza, okuzisa abatshaya be-HNB amava okutshaya agudileyo.
3.Ingaba i-TOFRE Heat Herbal Sticks inamagqabi ecuba?
I-TOFRE Heat Herbal Stick ayinazo zithako zecuba.Imvakalelo yokwenyani yokutshaya isekelwe kwifomula ye-100% yezithako zemifuno, kunye neteknoloji yokuvumba kwecuba eyamkelwe yi-Flavorists yethu, kunye ne-nicotine ecocekileyo yendalo ukubuyisela imvakalelo yokutshaya kakhulu.
Xa kuthelekiswa nobushushu obungatshisi bemveliso eyenziwe ngamagqabi ecuba, intonga ye-TOFRE Heat Herbal Stick enezithako ezicocekileyo zamayeza lukhetho olusempilweni lokutshaya.
4.Ingaba i-TOFRE Heat Herbal Sticks zineNikotini?
I-Nicotine yeyona nto ixhomekeke kubo bonke abantu abatshayayo, i-TOFRE iyafana, asiyi kuphazamisa kwi-nicotine.Ke ngoko, sibonelela ngemveliso yokutshaya ngokwaneliseka okuphezulu, incasa ebalaseleyo kunye nomngcipheko ophantsi kunecuba.Xa kuthelekiswa necuba lemveli, siwunciphise umngcipheko ngama-95% ngokugqwesileyo.
5.Ziziphi izithako ze-TOFRE Herbal Sticks?
Izithako ze-TOFRE Herbal Sticks zonke zisekwe kwimithombo yendalo kunye nekhuselekileyo, izithako ezingezantsi:
6.Sesiphi isixhobo se-HNB Heat esinokusetyenziswa kwi-TOFRE Heat Herbal Sticks?
I-TOFRE Herbal stick's special ultra-microcellular Herbal Technology ivumela ukuba siqhelane nazo zonke izixhobo zobushushu ze-HNB ezithengiswayo.Kwangaxeshanye, kungekudala siza kusungula isixhobo esikhethekileyo sobushushu be-tofre ukuze sihambelane nentonga yethu.